नाफामा प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसी – ostake
नाफामा प्रादेशिक अस्पतालको फार्मेसी
लमही, २८ माघ सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसी नाफामा जान थालेका छन् । दाङ तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल (साविक अञ्चल अस्पताल) मा सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसीले चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा रु साढे सात लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज सुलभ अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म रु सात लाख ५६ हजार १७८ नाफा कमाउन सफल भएको छ । कर्मचारीको तलब, अन्य खर्च कटाएर उक्त नाफा गर्न सफल भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
चालू आवको छ महीनामा बिरामीलाई रु आठ लाख ६६ हजार ८४० छुट प्रदान गरिएको छ । सबै सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपनि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि २०७३ माघमा सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म करीब रु १४ लाख ४३ हजार ३८८ बचत रहेको उहाँको भनाइ छ । फार्मेसी सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रु ३६ लाखभन्दा बढी बराबर बिरामीलाई छुट दिइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन भएपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार औषधिको प्रकारअनुसार पाँचदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरेका छन् । अहिले फार्मेसीमा करीब ९०० प्रकारका औषधि उपलब्ध रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
निजी अस्पतालभन्दा सस्तोमा औषधि पाउन थालेपछि फार्मेर्सीको काउण्टरमा भीड लाग्ने गरेको अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सर्वेश शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालको फार्मेसीबाट दैनिक रु ५० हजार बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ ।
अहिले फार्मेसी सञ्चलनका लागि चार कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । एक फार्मेसी इन्चार्ज र अन्य तीन फार्मेसी असिस्टेन्ट कार्यरत रहेका उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल फार्मेसी सङ्घ दाङका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिकारीले सबै स्थानीय तहमा फार्मेसीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा फार्मेसी सञ्चालन भए पनि फार्मेसीको दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुमानको भरमा औषधि दिने गरिएको छ ।
अहिले फार्मेसी सञ्चालनका लागि दुई कोठामात्रै भएकाले सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने गरेको फार्मेसी इन्चार्ज सुलभ अधिकारीले बताउनुभयो । औषधि स्टोरका लागि दुई कोठामा मात्रै असहज भएकाले स्टोरका लागि थप कोठा आवश्यक भएको बताउनुभयो । “अहिले चिकित्सक सुत्ने र स्टोर गर्ने कोठा एउटै छ”, उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
जब्बर लोकबहादुरको कन्फिडेन्स कस्तो ? कुकुरलाई झुक्कायो, प्रहरीलाई कथा सुनायो अन्तत यसरि फस्यो-भिडियो सहित
Other2 months ago
छोरीहरुको मायाले गर्दा ‘चम्सुरी’ले आफ्नो रोग बर्षौसम्म लुकाईन,दिदी भन्दै पुन्य गौतमले दिने भए मृगौला- भिडियो सहित
कांग्रेस नेत्रीले भनिन “बिजय शाहीलाई अब सरकारले कारवाही गर्छ” खुल्यो डरलाग्दो रहस्य – भिडियो हेरौ
बिजय शाहीले कती तमासा देखाको ? बिजयको अंग्रेजी र फर्मुलाको खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो सहित
सन्तोष देउजालाई लाग्यो यस्तो आ,रोप, सन्तोषलाई यस्तो सम्म भन्ने महिला यसरि आ,क्रोश हुँदै आइन मिडियामा – हेरौ भिडियो
Copyright © 2017 ostake.